I-wave ye-Ultrasonic uhlobo lwamagagasi womshini omvuthwandaba wawo wokudlidliza uphakeme kunowamagagasi womsindo. Ikhiqizwa ngokudlidliza kwe-transducer ngaphansi kwamandla e-voltage. Inezici zemvamisa ephezulu, ubude obufushane be-wave, isenzeko esincane sokuphambuka, ukuqondiswa okuhle ikakhulukazi, futhi kungaba ukusabalalisa okuqondisayo kwemisebe.
Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonicinsimbi iyindlela yokuhlakazeka enamandla engasetshenziswa ekuhlolweni kwelabhorethri nasekwelapheni uketshezi oluncane lwe-batch. Ibekwe ngqo emkhakheni we-ultrasonic futhi ikhanyiswe yi-high-power ultrasonic.
Insimbi yokusabalalisa ye-Ultrasonic yakhiwe ngezingxenye zokudlidliza kwe-ultrasonic, ukunikezwa kwamandla okushayela kwe-ultrasonic kanye neketela lokuphendula. Izingxenye zokudlidliza ze-Ultrasonic ikakhulu zifaka amandla amakhulu we-transducer, uphondo nekhanda lamathuluzi (okuhambisa ikhanda), okusetshenziselwa ukukhiqiza ukudlidliza kwe-ultrasonic futhi kukhiphe amandla e-kinetic kulolo ketshezi.
I-transducer iguqula amandla kagesi wokufaka abe ngamandla kagesi, okungukuthi igagasi le-ultrasonic. Ukubonakaliswa kwayo ukuthi i-transducer iya emuva naphambili ohlangothini lwe-longitudinal, futhi ubukhulu bayo buba semakhononi ambalwa. Amandla anjalo we-amplitude akwanele ukuthi angasetshenziswa ngqo.
Uphondo lungakhulisa ubukhulu ngokuya ngezidingo zomklamo, luhlukanise ikhambi lokuphendula kanye ne-transducer, futhi lilungise lonke uhlelo lokudlidliza lwe-ultrasonic. Ikhanda lamathuluzi lixhunywe nophondo, oludlulisa ukudlidliza kwamandla kwe-ultrasonic ekhanda lamathuluzi, bese kuthi amandla e-ultrasonic adluliselwe kuketshezi lokuphendula kwamakhemikhali yinhloko yethuluzi.
Izinyathelo zokuphepha zokusetshenziswa kwethuluzi lokusabalalisa le-ultrasonic:
1. Ithangi lamanzi alinakufakwa ugesi futhi lisetshenziswe kaningi isikhathi esingaphezu kwehora elilodwa ngaphandle kokungeza amanzi anele.
2. Umshini kufanele ubekwe endaweni ehlanzekile, eyisicaba ukuze isetshenziswe, igobolondo akufanele lichaphazelwe uketshezi, uma lukhona, kufanele lusulwe luhlanzeke nganoma yisiphi isikhathi ukugwema ukushayisana nezinto ezilukhuni.
3. Amandla kagesi wokunikezwa kwamandla kufanele ahambisane nalawo amakwe emshinini.
4. Ngenkathi usebenza, uma ufuna ukuyeka ukusebenzisa, cindezela inkinobho eyodwa.
Lokhu okungenhla yilokho uXiaobian akulethela khona namuhla, ngethemba lokukusiza ukuthi uwusebenzise kangcono umkhiqizo.